I-Franchise Resales - I-Franchise Resale Amathuba | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Iziza zaseFrance
I-Franchise Resales efakiwe
I-Franchise Resales yakamuva
Yini i-Franchise Resales?
Ukuthengisa kabusha kwe-franchise ibhizinisi le-franchise elithengiswayo elivele liqhutshwa yi-franchisee yangaphambili. Ngenxa yalokhu, ibhizinisi lokuthengisa kabusha le-Franchise selizoba nesizinda samakhasimende esivele sikhona kanye nezimpahla esezizophathwa.
Kunezizathu eziningi ezenza umuntu ongumnikazi wefilimu angafisa ukuthengisa ibhizinisi lakhe le-Franchise. Mhlawumbe bafuna ushintsho lwendlela yokusebenza, noma bafuna ukuzithengisa baphinde bathathe umhlalaphansi.
Izinzuzo Zokubamba I-Franchise
Kukhona lonke uhla lwezinzuzo zokuthenga okuthengiswa kwe-franchise, okungezwa kunzuzo yokuthenga i-franchise esikhundleni sokuqalisa. Izinzuzo zokuthenga i-franchise ethengisa ifaka phakathi nendawo ekhona yamakhasimende - uzobe uhola. Ngokwengeziwe, cishe uzovele unethimba labasebenzi nohlelo lokusebenza olusebenzayo. Lokhu kusho ukuthi ukutshala imali ekuthengisweni kwe-franchise ngokuvamile kuphezulu. Lokhu kungenxa yokuthi uthenga ibhizinisi, nazo zonke izimpahla zalo.
Yiziphi Izilinganiso ZaseFranchise Ziyatholakala?
Ngibhekabheka umkhombandlela wefrigise yamazwe omhlaba yamazwe ase Franchiseek yezindawo ezingezansi ezingezansi. Uzothola ama-franchise amaningi ahlukene okuthengiswa, avela kumikhakha eminingi yezimboni. Kubandakanya ukudla nesiphuzo, okuhlobene nezilwane ezifuywayo, ikhola emhlophe kanye nama-franchise asuka evan.